ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါရှာဖွေမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအနိမ့်ဆုံးနည်း Martech Zone
ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်မဏ္otိုင်ဖြစ်စေသည့်ကုမ္ပဏီများစွာကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကွဲပြားသောဒိုမိန်းသို့ပြောင်းရွှေ့နေသောဖောက်သည်တစ် ဦး ရှိသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအခုချက်ချင်းပဲလာနေကြတယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဒိုမိန်းများသည်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်သည်။
ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးခလုတ်တစ်ခုကကမ်းလှမ်းသော်လည်း ဒိုမိန်း tool ကို၏ပြောင်းလဲမှုသူတို့ပြောတာကိုသူတို့လျစ်လျူရှုထားတာကဒီဖြစ်စဉ်ဟာဘယ်လောက်နာကျင်တယ်ဆိုတာပါ။ နာပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဒိုမိန်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခွဲခြားရန် Marketing Tech ဘလော့တွင်ဒိုမိန်းအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိသည့်ကျွန်ုပ်၏ပထမတန်းစားသော့ချက်စာလုံးများအားလုံးနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အော်ဂဲနစ်ကျန်းမာရေးပြန်လည်ရရှိဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာခဲ့ပါတယ်။
ဒီမှာကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့ SEO စစ်ဆေးမှုစာရင်းပါ
အသစ်ဒိုမိန်းရဲ့ backlinks ပြန်လည်သုံးသပ် - ဒိုမိန်းတစ်ခုရရှိရန်ယခင်ကအသုံးမပြုသေးသော ဒိုမိန်းကိုအရင်ကအသုံးပြုခဲ့၊ မသုံးသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ၎င်းသည် SPAM စက်ရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကလုံးဝပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။ ဒိုမိန်းအသစ်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်နှင့်မေးခွန်းထုတ်စရာလင့်ခ်များကိုမဖျက်မချင်းသင်မသိရှိပါ။
ရှိပြီးသား backlinks ပြန်လည်သုံးသပ် - ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုသို့သင်မပြောင်းရွှေ့မီသင်ရှိထားသည့်အထူးကျောထောက်နောက်ခံများအားလုံးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သေချာပါစေ။ သင်က target list တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးသင်၏ PR အဖွဲ့သည်သင့်အားချိတ်ဆက်ထားသော site တစ်ခုစီကိုဆက်သွယ်ပြီးဒိုမိန်းအသစ်သို့သူတို့၏ link များကို update လုပ်ရန်တောင်းခံနိုင်သည်။ လက်တဆုပ်စာရသည့်တိုင်အချို့သော့ချက်စာလုံးများပြန်ခုန်ထွက်နိုင်သည်။
ဆိုက်စာရင်းစစ် - အခွင့်အလမ်းဟာသင့်ရဲ့လက်ရှိဒိုမိန်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောပိုင်ဆိုင်မှုအမှတ်အသားများနှင့်ပြည်တွင်းဆက်သွယ်မှုများအမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်သည်။ ထို link များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ PDFs များစသဖြင့်ပြောင်းလဲလိုပြီး site အသစ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်း update ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။ သင်၏ဆိုဒ်အသစ်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေတွင်ရှိလျှင် (အထူးအကြံပြုလိုသည်) ယခုပြင်ဆင်မှုများကိုယခုပြုလုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးအော်ဂဲနစ်စာမျက်နှာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ် - မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများကိုသင်အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးဘယ်စာမျက်နှာများကိုဖော်ပြသနည်း။ ဤသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဲ့သို့ကိရိယာတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ သင်စောင့်ကြည့်လိုသောအဆင့်များဖြစ်သည် gShift Labs။ သင်အမှတ်တံဆိပ်သော့ချက်စာလုံးများ၊ ဒေသဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများနှင့်သင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပြီးသင်ဒိုမိန်းအပြောင်းအလဲအပြီးတွင်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပြန်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
ဒိုမိန်းကိုစနစ်တကျပြန်ပြောင်းပါ အနည်းဆုံးသက်ရောက်မှုအတွက်ဒိုမိန်းအသစ်နှင့်အတူ URL အသစ်များကို 301 ကိုသင်အသစ်ပြောင်းလိုသည်။ လူတိုင်းသည်သင်၏ domain အသစ်၏ပင်မစာမျက်နှာသို့အကြောင်းကြားစာမပါဘဲလာချင်ကြသည်။ သင်သည်အချို့စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များအနားယူနေပါက၎င်းတို့အားကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲမှုအကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီအဘယ်ကြောင့်လုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်မည်သည့်နေရာမှသူတို့အကူအညီများရနိုင်မလဲဟူသောအကြောင်းကြားစာစာမျက်နှာသို့သူတို့ကိုသင်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။
ဒိုမိန်းအသစ်ကို Webmasters တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ - ချက်ချင်းပင် Webmasters သို့ ၀ င်ရောက်ပြီး၊ domain အသစ်ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။ Google မှ site အသစ်ကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး search engine များစတင်မွမ်းမံရန်သင်၏ XML sitemap ကိုတင်ပါ။
လိပ်စာ၏ပြောင်းလဲမှု Execute - သင်သည်ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြောင်းဂူဂဲလ်အားအသိပေးရန်လိပ်စာကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားပါ။
Analytics မှစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ - ဝင်မည် analytics နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု URL ကို update ။ သင့်တွင်ဒိုမိန်းနှင့်ဆက်နွယ်သောစိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိမှုများမများပါကသင်အတူတူပင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သင့်သည် analytics ဒိုမိန်းတက်သည်အကောင့်နှင့်တိုင်းတာခြင်းကိုဆက်လက်။
ဒိုမိန်းအဟောင်းကိုချိတ်ဆက်ထားသောဆိုဒ်များကိုအသိပေးပါ - ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနှင့်သက်ဆိုင်ရာနောက်ကျောများမှကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုခဲ့သောစာရင်းကိုမှတ်ထားပါ။ ထိုဂုဏ်သတ္တိများကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်အချိန်ရောက်ပြီ၊ သူတို့ကသူတို့၏ဆောင်းပါးများကိုသင်၏နောက်ဆုံးအဆက်အသွယ်အချက်အလက်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မွမ်းမံကြောင်းတွေ့မြင်ရပြီ။ သင်ဒီမှာအောင်မြင်လေလေသင့်အဆင့်ပြန်ကောင်းလာလေလေဖြစ်သည်။
ရွှေ့ပြောင်းစာရင်းစစ် - ဆိုက်ကိုနောက်ထပ်စာရင်းစစ်လုပ်ရန်အချိန်နှင့်ဒိုမိန်းအဟောင်းကိုညွှန်ပြသည့်မည်သည့်အတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှု၊ မဆိုဖော်ပြသည့်ပုံများသို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်သောအခြားအပေါင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုသင်မတွေ့ပါကိုနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ။
Monitor အဆင့်နှင့်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာ - ဒိုမိန်းအပြောင်းအလဲမှသင်မည်မျှပြန်ကောင်းလာကြောင်းကြည့်ရှုရန်သင်၏အဆင့်နှင့်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုစစ်ဆေးပါ။
သင်၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအားထုတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပါ - သင်၏ကုမ္ပဏီရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏အခွင့်အာဏာနှင့်တည်ရှိမှုကိုပြန်လည်ရရှိစေရန် byline တိုင်းလိုက်လျှောက်ရန်အချိန်ကျပြီ။ သငျသညျအထဲကအဲဒီမှာစကားများစွာသောချင်!
ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ထုတ်ဝေထားတဲ့ပရီမီယံအကြောင်းအရာစီးရီးကိုလည်းအထူးအကြံပြုလိုပါတယ်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကြေငြာခြင်းနှင့်လက်ရှိဖောက်သည်များအတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှကြီးလေးသောတုံ့ပြန်မှုကိုတောင်းခံရန် infographics နှင့် whitepapers အထိဖြစ်သည်။
Tags: ဒိုမိန်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းgoogle webmaster များအသစ်ကဒိုမိန်းဒိုမိန်းအသစ်ပြောင်းခြင်း
SEO PowerSuite: အလုပ်များသောဆိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက်ရလဒ်များရရန်အမြန်နည်းလမ်း ၅ ခု
ဇွန် 26, 2016 မှာ 11: 21 pm တွင်
ဤရွေ့ကားအကြီးအအကြံပေးချက်များများမှာ! သင်ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုသို့ပြန်လည်နေရာချထားသည့်အခါသင်၏စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများအကြီးအကျယ်နစ်မြုပ်သွားသည့်အခါ၎င်းသည်တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးကိုနမ်းရှုပ်ခြင်းနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။